Ireo mpikaroka dia afaka misambotra ireo fanadihadiana lehibe ary manipy azy ireo eo amin'ny fiainan'ny olona.
Ny fanombanana ara-potoana ara-tontolo iainana (EMA) dia mitaky ny fanadihadiana nentim-paharazana, ny famongorana azy ireo ary ny famafazana azy ireo eo amin'ny fiainan'ireo mpandray anjara. Noho izany, ny fanadihadiana dia afaka anontaniana amin'ny fotoana sy toerana mety, fa tsy amin'ny resadresaka maharitra herinandro aorian'ny fisehoan-javatra.
Ny EMA dia misy karazany efatra: (1) angona angon-drakitra any amin'ny tontolo misy tontolo; (2) fanombanana izay mifantoka amin'ny fanjakana na amin'izao fotoana izao na ny fitondrantenany vao haingana; (3) fanombanana izay mety hiorina amin'ny fotoana, miorina amin'ny fotoana na tsindraindray (miankina amin'ny fanontaniana fikarohana); ary (4) ny famitana ny fanombanana marobe tamin'ny fotoana (Stone and Shiffman 1994) . Ny EMA dia fomba iray hangatahana ny fanamafisana amin'ny finday manelingelina ny olona amin'ny ankapobeny. Ankoatr'izany, noho ny smartphones dia feno fonosana fitaovana toy ny GPS sy accelerometers - dia azo atao ny mampitombo ny fandrefesana mifototra amin'ny asa. Ohatra, azo atao ny mikarokaroka finday iray mba hanosehana fanontaniana fanadihadiana raha misy mpifaninana iray mankany amin'ny faritra iray manokana.
Ny fampanantenan'ny EMA dia tsara jerena amin'ny fikarohana nataon-dRamatoa Naomi Sugie. Hatramin'ny taompolo 1970, nanamafy ny isan'ny olona am-ponja i Etazonia. Hatramin'ny taona 2005, dia 500 eo ho eo amin'ny Amerikanina 100.000 no migadra, farafaharatsiny ny (Wakefield and Uggen 2010) am-ponja ambony noho ny any an-kafa (Wakefield and Uggen 2010) . Ny fiakaran'ny isan'ny olona miditra am-ponja dia niteraka fiatoana ihany koa tamin'ny isa miala ny fonja; olona 700.000 no miala am-ponja isan-taona (Wakefield and Uggen 2010) . Ireo olona ireo dia miatrika fanamby goavana amin'ny fialana am-ponja, ary indrisy fa maro no mihemotra any. Mba hahatakarana sy hampihenana ny fiverenan'ny residivisma, ny mpahay siansa sosialy sy ny mpanao politika dia mila mahatakatra ny traikefan'ny olona rehefa miverina miditra amin'ny fiarahamonina izy ireo. Na izany aza, sarotra ny manangona ireo angon-drakitra ireo amin'ny fomba fanadihadiana mahazatra satria toa sarotra be ny fandalinana ny mpandika lalàna ary ny toetrany dia tena tsy mety. Ny fametrahana fomba fametrahana fametrahana ny fitsapan-kevitra isaky ny volana vitsivitsy dia mitaky ny hamaroan'ny dinamika eo amin'ny fiainany (Sugie 2016) .
Mba handinihana ny fizotry ny famerenana indray miaraka amin'ny fahamendrehana bebe kokoa, i Sugie dia nahavita santionam-pahaizana maromaro tamin'ireo olona miisa 131 avy amin'ny lisitra feno ireo olona miala an-tranomaizina any Newark, New Jersey. Nomen'ilay mpandray anjara amin'ny finday smartphones izy, izay lasa sehatra fitadiavana angona tahiry, ho an'ny fitantanana ny fitondran-tena sy hametrahana fanontaniana. Nampiasa ny finday i Sugie mba hitantana karazana fanadihadiana roa. Voalohany dia nandefa "fanadihadiana famintinana traikefa" izy tamin'ny fotoana iray voafaritra voafaritra teo anelanelan'ny 9 sy 18 sy sasany alina nangataka ny mpandray anjara momba ny asa aman-draharahany ankehitriny. Faharoa, tamin'ny 7 hariva, nandefa "fanadihadiana isanandro" izy nanontany momba ireo hetsika rehetra tamin'io andro io. Fanampin'izany, ankoatra ireo fanadihadiana ireo, ny finday dia nandrakitra an-kalamanjana ny toerana misy azy ary nitana ny rakitra miafina ny antso sy ny meta-data. Ny fampiasana io fomba fanao io-izay mampifandray ny fangatahana sy ny fandinihana dia i Sugie dia afaka namorona fandrefesana maimaim-poana momba ny fiainan'ireto olona ireto rehefa miverina miditra amin'ny fiarahamonina izy ireo.
Mino ny mpikaroka fa ny fitadiavana asa an-kalamanjana sy tsara kalitao dia manampy ny olona hivoatra any amin'ny fiaraha-monina. Na dia izany aza, i Sugie dia nahita fa, tamin'ny antsalany, ny traikefan'ireo mpandray anjara tamin'ireo mpandray anjara dia tsy ara-potoana, vonjimaika ary ara-potoana. Ity fanoritsoritana ny lamina midadasika ity, na izany aza, dia manasongadina ny tsy fitoviana lehibe. Sugie, ohatra, dia nahita faka miavaka efatra tao amin'ny dobo fandraisam-bahiny: "fialantsasatra aloha" (ireo izay manomboka mitady asa fa avy eo amin'ny tsenan'ny asa), "fikarohana maharitra" (ireo mandany fotoana betsaka amin'ny fitadiavana asa) , "Asa miverimberina" (ireo mandany fotoana betsaka amin'ny fiasa), ary "valiny ambany" (ireo tsy mamaly ireo fanadihadiana matetika). Ny vondrona "fivoahana aloha" - ireo izay manomboka mikaroka asa nefa tsy mahita izany ary tsy mitsahatra mikaroka-dia tena manan-danja satria io vondrona io angamba no mety hiteraka fahombiazana indray.
Mety hihevitra ny olona iray fa ny fikarohana asa aorian'ny fisamborana dia sarotra be, izay mety hitarika ho amin'ny fahaketrahana sy hialana amin'ny tsenan'ny asa. Noho izany, Sugie dia nampiasa ny fanadihadiana nataony mba hanangonam-baovao momba ny toetran'ireo mpandray anjara mampihetsi-po - fanjakana iray izay tsy dia takatry ny sanda amin'ny fitondran-tena. Mahavariana fa hitany fa ny "fivoahana aloha" dia tsy nitatitra ny haavon'ny tsindry na ny tsy fahasambarana. Fa ny mifanohitra amin'izany: ireo izay nitohy nitady asa dia nitatitra fahatsapana fihetseham-po bebe kokoa. Ny tsipiriany rehetra momba ny fitondran-tena sy ny fihetseham-po mampihetsi-po ataon'ny mpanelanelana dia manan-danja amin'ny fahatakarana ny sakana atrehiny sy ny fanamafisany ny fiverenany ho any amin'ny fiarahamonina. Ankoatra izany, ireo tsipiriany rehetra ireo dia tsy hita tao anatin'ny fanadihadiana natao.
Ny fanangonana tahirin-tsakafo nataon'i Sugie miaraka amin'ny mponina vulnerable, indrindra fa ny fanangonana tahirin-kevitra, dia mety miteraka olana saro-bahana. Saingy niandrandra izany i Sugie ary niresaka tamin'izy ireo tamin'ny endriny (Sugie 2014, 2016) . Nodinihin'ny antoko fahatelo-ny Institutional Review Board ao amin'ny anjerimanontolony - ary nanaraka ny fitsipika efa misy. Ankoatra izany, mifanaraka amin'ny fomba fiasa mifototra amin'ny fitsipika izay ambarako ao amin'ny toko faha-6, ny fitsabatsangan'i Sugie dia lasa lavitra mihoatra ny zavatra takian'ny fitsipika misy ankehitriny. Ohatra, nahazo fankatoavana manan-danja avy amin'ny mpandray anjara tsirairay izy, nahatonga ireo mpandray anjara hanakatona ny fanarahamaso ara-jeografika mandritra ny fotoana voafetra, ary nandeha lava be izy mba hiarovana ireo angona noraisiny. Ankoatra ny fampiasana angona sy tahirin-tsarimihetsika, dia nahazo mari-pahaizana momba ny tsiambaratelo avy amin'ny governemanta federaly izy, izay midika fa tsy voatery hampihemotra ny angon-drakiny amin'ny polisy izy (Beskow, Dame, and Costello 2008) . Heveriko fa noho ny fomba fijeriny lalina, ny tetikasa Sugie dia manome modely sarobidy ho an'ireo mpikaroka hafa. Raha ny tena izy, dia tsy nanafintohina ny jambany izy, ary tsy nieritreritra ny hanao fikarohana lalina izy satria sarotra be izany. Nieritreritra tsara kosa izy, nitady torohevitra sahaza, nanaja ny mpandray anjara, ary nanao dingana mba hanatsarana ny tombony azo avy amin'ny fianarana.
Heveriko fa misy lesona ankapobeny telo avy amin'ny asa nataon'i Sugie. Voalohany, ny fomba fanao vaovao hangatahana dia mifanaraka tanteraka amin'ny fomba nentim-paharazana nentim-paharazana; Tadidio fa i Sugie dia namela ohatra azo tsapain-tanana avy amin'ny fokonolona iray voafaritra tsara. Faharoa, ny fandrefesana hafanam-be sy ny halavirana dia mety ho sarobidy indrindra amin'ny fandalinana ny traikefa ara-tsosialy izay tsy ara-dalàna sy mavitrika. Fahatelo, raha toa ka miaraka amin'ireo loharanom-baovao lehibe ny fanangonana tahirin-kevitra momba ny fanadihadiana-zavatra izay heveriko fa lasa mihabetsaka kokoa, araka izay hoeritreretiko manaraka ato amin'ity toko ity-mety hisy olana ara-etika hafa mety hipoitra. Hanaraka ny fitsipi-pikarohana amin'ny antsipirihany aho ao amin'ny toko faha-6, fa ny asa nataon'i Sugie dia mampiseho fa ireo olan'ireo mpikaroka ireo dia mety hiantehitra amin'ireo mpikaroka.